Cold War muchinjika #1
Cold War muchinjika #2
Cold War muchinjika #3
Cold War muchinjika #4
Cold War muchinjika #5
Cold War muchinjika #6
Hondo Yemashoko Cold
Cold War zvinyorwa
Cold War nyaya yemibvunzo
Cold War vanyori venhoroondo
Cold War nhoroondo
Cold War memory quiz - zviitiko 1945 kusvika 1950
Cold War memory quiz - zviitiko 1950 kusvika 1959
Cold War memory quiz - zviitiko 1960-1979
Cold War memory quiz - zviitiko 1980 kusvika 1991
Cold War memory quiz - mapoka
Cold War memory quiz - vatungamiriri
Cold War ndangariro quiz - mazwi uye pfungwa (I)
Cold War ndangariro quiz - mazwi uye pfungwa (II)
Cold War mafirimu uye TV
Hondo Yemashoko Akatonhora
Hondo dzeCold Quotes
Cold War ndiani
Cold War izwi rinotsigira - pfungwa
Cold War izwi rinogadziriswa - zviitiko
Cold War izwi remuchinda - mapoka
Cold War wordsearch - vanhu
Cold War wordsearch - nzvimbo
Hondo Yemashoko yaive nguva yakareba yekushushikana kwenyika pamwe nekunetsana pakati pe1945 ne1991. Yakanga yakaratidzirwa nemakakatanwa akasimba pakati peUnited States, Soviet Union pamwe nevabatanidzwa navo.
Izwi rekuti 'kutonhora' rakagadziriswa nemunyori George Orwell, uyo muna Gumiguru 1945 akafanotaura nezvenguva ye "kugadzikana kunotyisa" uko nyika dzine simba kana mubatanidzwa blocs, imwe neimwe inogona kuparadza imwe, inoramba kutaura kana kutaurirana.
Kufanotaura kwaOrwell kwakatanga kuratidza mu1945. Sezvo Europe yakasunungurwa kubva paudzvanyiriri hweNazi, yaigara neSoviet Red Army kumabvazuva uye maAmerican neBritain kumadokero. Kumisangano yekuratidza ramangwana remashure mehondo Europe, kunetsana kwakamuka pakati pemutungamiriri weSoviet Joseph Stalin nevamwe vake vekuAmerica neBritish.
Pakasvika pakati pe1945, tarisiro yekudyidzana kwehondo yapashure pehondo pakati peSoviet Union nenyika dzeWestern dzakabviswa. Kumabvazuva kweEurope, vamiririri veSoviet vakasundira mapato ezvematongerwo enyika masimba, zvichikonzera vezvematongerwo enyika veBritain Winston Churchill kunyevera nezveIron Curtain”Achiburukira kuEurope. United States yakapindura nekushandisa iyo Marshall Chirongwa, yemakore mana emadhora 13 mabhiriyoni ekubatsira pakeji kudzorera hurumende dzeEurope nehupfumi. Pakupera kwe1940s, kupindira kweSoviet uye rubatsiro rwekuMadokero rwakakamura Europe kuita maviri.
Mepu inoratidza kukamurwa kweEurope panguva yeCold War
Pakutanga kwemugove uyu kwaive shure kwehondo Germany, yakanamatira kuita maviri uye guta rayo guru Berlin inogarwa nemasimba mana akasiyana.
Mu1948, Soviet uye East Germany inoedza kuziya nenzara masimba eWestern kunze kweBerlin vakavhiringidzwa nendege yakakura kwazvo munhoroondo. Mu1961 iyo hurumende ye East Germany, yakatarisana ne kubuda kukuru kwevanhu vayo, yakavhara miganhu yayo uye ikamisa chipingamupinyi chemukati muguta rakakamurwa reBerlin. The Berlin Wall, sekuzivikanwa kwazvakaitwa, chakave chiratidzo chisingaperi cheCold War.
Hondo dzeCold kusawirirana kwakapararirawo kupfuura miganhu yeEurope. MunaGumiguru 1949, Shanduko yeChinese yakagumisa nekukunda kweMao Zedong uye neChinese Communist Party. China yakakurumidza kuita maindasitiri ikava simba renyukireya, uku kutyisidzira kwecommunism kwaendesa Cold War kutenderwa kuAsia Mu1962, kuwanikwa kwe Soviet kupotsa pachitsuwa cheCuba akasundira United States neSoviet Union kumucheto kwehondo yenyukireya.
Zviitiko izvi zvakafutisa chikamu chisina kumbobvira chafungidzirwa, kusavimbika, paranoia uye kuvanzika. MaAgency seCentral Intelligence Agency (CIA) uye Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) yakawedzera yavo mabasa ekuvanda kutenderera nyika, kuunganidza ruzivo nezve nyika dzevavengi uye nyika. Vakapindirawo mune zvematongerwo enyika dzedzimwe nyika, vachikurudzira nekupa mafambiro epasirese, kusimuka, coup d'etats nehondo dzechiitiko.
Vanhuwo zvavo vakasangana neCold War munguva chaiyo, kuburikidza neiyo yakanyanya mishandirapamwe yekuparadzira munhoroondo yevanhu. Hondo dzeCold nemaitiro enyukireya akazara munzvimbo dzese dzakakurumbira, kusanganisira firimu, terevhizheni uye mumhanzi.
Alpha Nhoroondo yeCold War webhusaiti ndeye yakazara zvinyorwa zvemhando yemhando yekudzidza nezvematongerwo enyika uye ehondo pakati pe1945 ne1991. Iyo inenge inenge 400 akasiyana epakutanga uye sekondari masosi, kusanganisira yakadzama misoro yenyaya, zvinyorwa, nguva, glossaries uye nhoroondo dzeupenyu. Vadzidzi vepamberi vanogona kuwana ruzivo nezve Cold War nhoroondo uye vanyori venhoroondo. Vadzidzi vanokwanisa zvakare kuyedza ruzivo rwavo uye nekurangarira nemhando dzakasiyana dzezviitiko zvepamhepo, zvinosanganisira mibvunzo, crosswords uye manzwi emashoko. Kwekutanga zvinyorwa parutivi, zvese zvirimo paAlpha Nhoroondo zvakanyorwa nevadzidzi vanokwanisa uye vane ruzivo, vanyori uye vanyori venhau.